Uzo ozo di na Google Analytics? | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 14, 2009 Satọde, Febụwarị 20, 2016 Douglas Karr
Izu a na-arụ ọrụ, otu n'ime ndị ahịa anyị na-ajụ ihe isi mmalite okporo ụzọ "ndị ọzọ" na Google Analytics (GA).
Enweghi oke nkọwa zuru ezu na ntanetị maka nchịkọta Google ka ị nwee ike igwu ala. A makwaara okporo ụzọ ajụ na GA. Emere m igwu ala ma chọpụta na Google Analytics na-ejide ọkara na-akpaghị aka maka ụfọdụ ndị ọzọ na-ajụ ase, nke kachasị mkpa email.
Iji chọta ndepụta nke ndị ọzọ na-ajụ ase, ịkwesịrị pịa na Isi mmalite okporo ụzọ> Isi mmalite okporo ụzọ. Nke a ga - enye gị ndepụta ụzọ isi nweta azụmahịa gị yana ndị na - ajụ ase.
Enwere ndakpọ ebe ị nwere ike iyo na nke ọkara ahụ, iji gosipụta ụzọ okporo ụzọ ndị ọzọ niile.
Nke a nwere ike ịbụ ezigbo ngwa ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eji email ahịa iji mee ka okporo ụzọ laghachi na weebụsaịtị gị, ị nwere ike ịlele otu ị si eme nke ọma site na ịgbakwunye querystring na-akọwapụta usoro:
Enwere ọtụtụ ọnụọgụ ole dị ma ọ bụrụ na ịchọrọ tụọ mkpọsa gị.
Tags: Google Analyticsọzọ okporo ụzọ isi iyiisi mmalite okporo ụzọutm_medium
Feb 14, 2009 na 4:07 PM
Naanị ị hụrụ nke a ụbọchị ole na ole gara aga ma enweghị ike ịchọpụta ya. Ugbu a ka m maara otú… ekele!
Feb 14, 2009 na 11:26 PM
Ahụrụ m nke a mana echetụdịghị m echiche nke ọma. Nke ahụ bụ ezigbo ego n'agbanyeghị. Akpara m na inwe email maa ụlọikwuu otú a koodu ga-abịa kemfe.
Feb 15, 2009 n’elekere 2:15 nke abali
Daalụ maka nnukwu ego! Aga m na-egwu na menu adaala ugboro ugboro ugbu a…
Feb 15, 2009 na 2:00 PM
Obi ụtọ m isiokwu nwere ike inyere!
Feb 18, 2009 n’elekere 8:15 nke abali
Infact enwere otutu ihe ighota diri anyi na ebe a. Anyị nwere ike iji ngalaba dị iche Organic na inorganic okporo ụzọ na-abịa site na igwe na-achọ ihe na-abịa nke ọma n'oge. Mee otutu ihe site na GA!
Onye na-emegharị mkpọ Delhi
Mee 7, 2009 na 2: 55 PM
Daalụ maka nnukwu ego! Aga m eji egwu menu a na egwu egwu ugbu a?
Hey Doug - ekele maka post. Achọpụtala m na "Ndị ọzọ" a na-abawanye n'ime izu ma ghọtazie ihe na-eme.
Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ike inye aka, Steven!
Aug 15, 2011 na 9:32 PM
ma enwere ụzọ ịgbaso njikọ dị na nchịkọta google na isi iyi okporo ụzọ. Enwere m mmụba dị ukwuu nke nleta sitere na isi iyi okporo ụzọ mana anaghị m amata ya ma enweghị m ike ịchọta ya na weebụ?
Aug 15, 2011 na 10:22 PM
Ee, inwere ike ime mana ọ bụ ihe ụfụ. Ga-pịa ọ bụla Ntuziaka isi iyi ngalaba onwe ha na mgbe ị ga-ahụ zuru ụzọ nke Ntuziaka. Ihe jikọrọ ya bụ nseta ihuenyo (ya na nhazi GA ọhụrụ).
Ọkt 31, 2011 na 8:21 PM
Anọ m na-enweta 50% okporo ụzọ ugbu a… nke ihe dị ka 200-300 na-akụ kwa ụbọchị. 02% nke kụrụ aka dị ọhụụ, ọnụego bounce dịkwa gburugburu 60% - 70%… Ọ bụ ihe nkịtị? Olee ihe nwere ike ịkpata ya? Kedu ihe bụ ọnụego gị?
Ọkt 31, 2011 na 9:19 PM
Echere m na 50% okporo ụzọ bụ ọmarịcha ọnụ ọgụgụ yana ọnụego ibiaghachi ị kọwara. Ka saịtị gị na - eto eto - ọkachasị ya na ọchụchọ yana mmekọrịta mmadụ na ibe - ị ga - ahụ ọnụ ọgụgụ dị elu karịa na ntinye aka na ọnụọgụ ọchụchọ, yana ọnụego dị elu iji soro ha!
M na-eme ihe n'eziokwu adighi-etinye otu saịtị na nke ọzọ… I agha okenye na ọnọdụ ndị ọhụrụ na-eme iji hụ na anyị na-aga n'ụzọ ziri ezi. Daalụ maka ịkekọrịta Namanyay!
Nov 1, 2011 na 6:19 AM
Daalụ maka ọsọ nzaghachi 😀